Wariye lagu xiray Puntland | KEYDMEDIA ONLINE
Wariye lagu xiray Puntland
Horey waxaa Garowe loogu xiray, walina xabsiga ugu jira Kilwe Aadan oo aan maxkamad lasoo taagin mudo bilooyin ah.
BOOSAASO, Soomaaliya - Wariye Axmed Bootaan Carab ayaa maanta lagu xiray magaaladda Boosaaso, ee xarunta gobolka Bari isagoo ku guda jira aruurinta ra'yiga dadweynaha ee ku aadan khudbadii xalay uu Deni ka jeediyay Garoowe.
Ciidamada ayaa xabsiga u taxaabay Suxufiga iyaadoo aan wadan warqad maxkamadeed oo lagu soo xiro, waxaana xariga uu kusoo beegmayaa xili ay Puntland ka jirto ku xad-gudub lagu sameynayo wariyeyaasha iyo warbaahinta madaxa-banaan.
Waxaa Garoowe ku xiran mudo Kilwe Aadan oo lagu hayo meel aan la ogeyn gudaha Garoowe, iyadoo aan la ogeyn sababta uu u xiran yahay iyo waxa keenay in mudo intaas la eg aan lasoo taagin wax Maxkamad ah.
Deni ayaa xalay khudbad uu jeediyay ku weeraray Farmaajo, isagoo banaanka soo dhigay hadal u qarsoonaa oo ku saabsan shirarkii ka dhacay Dhuusamareeb iyo Muqdisho ee arrimaha doorashadda.